Manome varotra bateria avo lenta avo lenta 5000mah 3.7v li-ion 21700 sela bateria avo lenta miaraka amin'ny vidin'ny orinasa izahay.Shenzhen Polymer Battery Co. Ltd dia orinasa mpamokatra bateria lithium azo averina ho an'ny karazana bateria toy ny 21700, 18650, 14500, 123A, 103450 , AA, AAA sy ny sisa. Ny vokatra vokarintsika dia misy ny Lithium Battery, ny fiara mifehy fiara, fiara fitaterana lozisialy amin'ny fitehirizana ny angovo sy ny bateria, mety ho an'ny jiro finday.traffic, fiara, fanaraha-maso ny filaminana. ara-bola, hery famerenam-bola ary sehatra hafa.
18650-4s 14.8v 3400mAh fonosana vita amin'ny bateria vita amin'ny bateria vita amin'ny bateria vita amin'ny bateria for Fusion Splicer
Manome kalitao avo lenta 18650-4s 14,8v 3400mAh Rechargeable Polymer Lithium Battery fonosana ho an'ny Fusion Splicer.Ny fonosana bateria dia azo ampiasaina Fusion Splicer, mpanonta finday, mpanova finday, jiro hazavana, fanaraha-maso sy fitaovana hafa mifanaraka amin'izany.81 * 73 * 18 mm Dimension vita amin'ny sela bateria Samsung 18650-35E 3500mah kalitao avo lenta misy fahaiza-manao tena izy. Papanam-piarovana namboarina tao anatiny mba hitazomana ny fiainana sy ny bateria ho lava kokoa. Izahay no mpanamboatra any Shenzhen nandritra ny taona maro, ary azontsika atao ny mampiavaka anao raha tsy manana ny bateria ilainay ny magazay anananao, dia aza misalasala mifanerasera aminay amin'ny alàlan'ny mailaka sales@polymer-batterys.com
Varotra mafana 36V 9AH / 10Ah / 13.6Ah / 17Ah 20Ah ion lithium ion azo averina ao anaty fonosana bateria
Izahay mafana dia mivarotra 36V 9AH / 10Ah / 13.6Ah / 17Ah 20Ah ion lithium ion azo averina ao anaty fonosana batery. Afaka manome bateria Li-ion sy bateria Li-polymer amina an-jatony maro izahay
modely ho an'ny andiany tsirairay. Ankoatr'izay, ny serivisy OEM & ODM dia
nomena arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa samihafa. Isika rehetra
atobohy atrikasa tsy misy vovoka, fitaovana mandeha ho azy ary mizana
fahaiza-miasa, miaraka amina rafitra fanaraha-maso kalitao tonga lafatra
izay ahafahantsika manome vokatra avo lenta sy azo antoka ho anay
Ry mpanjifa! Manarona ny ankamaroan'ny tsenan'i Korea, Japon ary Amerika. Manantena izahay fa ho mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Fanatanterahana avo lenta masoandro fitehirizana herinaratra EV 3.2v 50ah sela batterie lifepo4 azo refesina
Manome kalitao avo lenta amin'ny herinaratra fitehirizana ny habaka herinaratra avoakan'ny vatan'ny herinaratra 3.2v 50ah ianao. Fampivoarana natao manokana, varotra mivantana ny orinasa, batteria marika, fikaroham-bolo sy fikarohana fivoarana, fanandramana amin'ny indostria, fizotran'ny famokarana matotra ary maharitra.Manao manome bateria LFPO4-1 avo lenta amin'ny klioba manerana an'izao tontolo izao ary manampy ny mpanjifa mamita bateria avy any Sina ho azy ireo. amin'ny ranomasina sy amin'ny rivotra amin'ny vidiny mirary. Ary manome ny fanohanana ara-teknika ilaina sy ny garantiana ilaina aminao izahay!
Prismatic ho an'ny Solar Storage Lithium Battery Cell Lifepo4 3.2V 105Ah
Ny batterie PLM-105A 3.2V 105Ah azo averina ampiasaina dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo lenta azon'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Factory 18V 2.0Ah Li-ion fanoloana bateria fandavahana herinaratra
Manome alim-bidy fanodinana elektrika 18V 2.0Ah Li-ion avo lenta izahay. Ny fonosana bateria dia azo ampiasaina amin'ny mpanamboatra herinaratra, fiarovan-doha elektrika, vokatra finday, fitaovana azo entina, robot kely, famatsiana herinaratra, fanaraha-maso ara-pahasalamana, Ventilator, vokatra ivelan'ny varavarana fandavahana tsy misy tariby, bateria fanoloana kapila ary fampiharana mety hafa. ekipa teknika tsara PLM, miandry ny famahana ny fanontanianao. Manaraka ny fepetra takiana aminao sy ny fotoana famokarana izahay. Manoro hevitra anao ny matihanina. Anglisy tsara am-bava sy an-tsoratra, alao antoka fa mifampiresaka tsara ianao. ny fangatahana dia valiny ao anatin'ny 24ora.
Rechargeable Prismatic LiFePO4 Battery 48V 12Ah Battery for Sambo, Fiara, Toeram-pamokarana herinaratra, Weeder
Ny batterie PLM-12A 48V 12Ah dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fatrany avo indrindra mety ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.